बालकृष्ण निस्के, रेशम चौधरी एक्लै भए ! – Tharuwan.com
निकै जान्ने पल्टिएर एक हरफ विदेशको प्रसङ्ग पनि जोडौं । गोरा र काला जातिको संघर्षको कालखण्डमा नेल्सन मण्डेलाले काला जातिहरूलाई दासत्वबाट मुक्त गर्न वर्षौंवर्षसम्म जेलको भित्तामा आफू निस्किने दिनको रेखा कोरेर बस्नुपरेको थियो । तर त्यो दिन कुनै मिति थिएन, केवल एउटा अपेक्षा मात्र थियो । रंग दासत्वको त्यो निर्मम बिरासतलाई नामेट पार्न खोज्दा मण्डेलालाई किन जेलभित्रै बन्दी पारियो रु
ढुङ्गेलको चित्तदुखाइ धेरै हदसम्म हैन, पूरै सही छ । राज्य भनेको व्यवस्था परिवर्तनको संवाहक मात्र हैन, त्योबीचमा घटेका घटनाहरूको जिम्मेवारी लिने निकाय पनि हो । जस्तो कि १२ बुँदे सहमति जिम्मेवारीको एक उदाहरण हो । तर दुईचारजना मानवअधिकारवादको व्यापारीलाई फाइदा पु–याउन राज्यको मूल स्पिरिटका रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियाको चिरहरण गर्न मिल्छ रु शान्ति प्रक्रिया भन्नुको अर्थ त्यसभन्दा अगाडिको लडाईं रोक्ने भनेको त होला नि हैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना जेल जीवनका अनुभूति सुनाउन थाल्नुभयो भने निकै महान् कर्म गरेजस्तो आँखा चम्काउनुहुन्छ । मानौं कि एकबारको जुनीमा उहाँले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको नै जेलजीवन बिताएको हो । खिस्स हाँस्दै ‘म परिवर्तनका लागि जेलनेल बस्दा तिमीहरू आमाको गर्भमा पनि थिएनौ’ भन्ने उहाँको वचन निकै तीखो हुनेगर्छ । हाँसोमा पनि रोदन लुक्नेगरी उखान फ्याँक्नुहुन्छ उहाँ । उहाँको तर्क हुन्छ, ‘म जेलनेल खाएको मानिस हुँ, तिमीहरू बतासे भुइँफुट्टाहरूलाई के थाहा छ रु’
बीपी कोइराला, मदन भण्डारीका महान देनहरू पनि जनताकै भावनामाथि उभिएका थिए । जनताकै जगमा उभिएर तिनले नीति, योजना बनाएका थिए । र क्रमशः तिनीहरूले दासत्वका पर्खालहरूलाई प्वाल पार्न खोजिरहेका थिए । त्यही प्वालबाट एकएक गरेर फुत्त बाहिर निस्किएर, कतै विलीन हुँदै गए एकछत्र राज गरिरहेका शासकहरू । अनि जनताले चुनेका जनताको प्रिय नेता शासक बन्न थाले । हामी नेपालीहरू जम्माजम्मी सामन्तवादी लिगेसीमा चलेको व्यवस्थाबाट भर्खरै फुत्किएका दुखिया शुक्रकीट हौं ।
तर यथार्थ कुरा भन्नैपर्छ । प्रहरीकै गोप्य दस्तावेजमा लेखिएको छ – ‘टीकापुरको घटना हुँदा उनी चार कोस टाढा थिए ।’ त्यस घटनाका बारेमा नेकपा नेता भीम रावल धेरै जानकार छन् । यहाँ सत्य कुरा लुकाइएको छ । कसका योजनामा थारूका बस्तीहरू जलाइयो, कसका योजनामा थारू चेलीबेटीहरूलाइ बलात्कार गरियो रु त्यो गाउँमा प्रहरीको कुटाइ नखाएको घरै छैन । बालबच्चादेखि बुढेसकाल लागेका थारूहरूलाई पनि निकै बर्बरताका साथ कुटपिट गरिएको छ ।
मार्न आउनेहरूसँग जाइलाग्ने त आन्दोलनको प्रकृति नै होला । जनआन्दोलनमा यस्तै भएको थियो । टीकापुरमा प्रहरीको गोलीबाट सयांै घाइते भएको कुरा अझै लुकाइएको छ । टाउको र छातीमा ताकी–ताकी गोली हानेर मारेको सत्यता, बाध्यताको कारणले मात्रै बाहिर आएको हो । आन्दोलन दबाउन किन ताकी–ताकी गोली हानेर सीधै मारियो रु त्यसको प्रतिक्रिया के होला रु के त्यहाँका जनता फूलमाला र अबिर बोकेर निस्केलान् सरकारको अभिनन्दनमा ?
केही वर्षपहिले भारतीयहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए । तर किन गरेका थिए त रु भेदहरू उतिखेरै पनि प्रस्ट नभएका हैनन्, तर कसैले बोल्ने हिम्मत गरेनन् । नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले तीव्र गति पक्रेको, जातीय अधिकारका लागि विभिन्न समुयदायहरू संगठित बन्दै गइरहेको अवस्थामा र त्यसले सफल नै हुने छाँटकाँटको कठोर प्रारूप लिँदै गर्दा आन्दोलनकारीहरूको सेन्टिमेन्ट ‘एन्टी इन्डिया’ तिर ढाल्न नाकाबन्दीलाई प्रश्रय दिने काम राज्यबाटै भएको थियो । बृहद् योजना अनुसार भएको थियो ।
के त्यो टीकापुर घटनाको केन्द्रविन्दु मधेसी समुदायको राजनीतिक आन्दोलन हैन र ? रेशम चौधरीले एक्लै कसरी त्यति धेरै प्रहरी मारे ? कुन हतियार थियो उनीसँग रु कुन गोलीगट्ठा थियो उनको झोलामा ? उनको घरमा, होटलमा, एफएममा कति भेटिए बम, गोला र बारुदहरू ? उनले कति महिनासम्म तालिम गरेका थिए हत्याकण्ड मच्चाउनका लागि ? उनको मोबाइल फोनका सम्पर्कहरू चेकजाँच गर्दा के कस्ता अपराधीहरूसँग ‘कनेक्सन’ भएको देखियो ?
टीकापुरमा जे भयो त्यो नराम्रो भयो । तर यो आन्दोलनको जगमा उभिएर भएको दुःखद घटना थियो । मध्यरातमा रेशम चौधरी चौकी आक्रमण गर्न गएर प्रहरी मारेका हैनन् । रेशम चौधरीले योजना बनाएको भन्ने छ । कहाँ बनेको थियो त्यो योजना ? केके छन् दसी प्रमाण ?केही खुल्दैन, केवल भनिन्छ, रेशम चौधरी हत्यारा हो । यो सत्यता सबैले बुझेका छन् । तर किन बुझेर बुझ पचाइरहेका छन्, उदेक लाग्छ ।
लोकतान्तर डटकमबाट साभार
235 छुटाउनु भयो कि विचार